Android Firmware upload ​နဲ့ ​ပါတ်​သက်​ပြီး ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​ကျ​နော် Samsung firmware ​နဲ့ ​ပါတ်​သက်​ပြီး ​တင်​နေ​တာ ​ထွက်​သ​မျှ ​တ​ဝက်​ကျိုး​နေ​ပါ​ပြီ. Google Drive ​က​နေ ​တင်​ပေး​ထား​တာ​ပါ။ Download link ​တွေ​ကို D tree ​ပုံ​စံ​နဲ့ ​ချိတ်​ပေး​ဖို့​ပဲ ​ကျန်​ပါ​တော့​တယ်. ​မ​ကြာ​ခင် ​အား​လုံး ​ပြီး​တော့​ပါ​မယ်။ Download ​လုပ်​ထား​တဲ့ ​ကွန်​ပျူ​တာ​ထဲ​လည်း save ​လုပ်​ပြီး Download ​လုပ်​ဖို့​တောင်​မှ ​ထည့်​စ​ရာ​နေ​ရာ​တောင် ​မ​ကျန်​တော့​ဘူး။ :P